समाचार - कसरी टिसु होल्डर छनौट गर्ने?
टिसू होल्डर कसरी छनौट गर्ने?
आजकल, टिशो होल्डर प्रत्येक होटल, रेस्टुरेन्ट, र सेनेटरी ठाउँमा सुसज्जित छ, र यसले हाम्रो आवश्यकताहरू पनि पूरा गर्न सक्छ। सेनेटरी उपकरण सुसज्जित गर्न छनौट गर्दा, टिश्यु होल्डर हुनै पर्छ। यसले पानी छहल्नेबाट रोक्न सक्छ। यो धेरै सुविधाजनक छ। अवश्य पनि, धेरै रेस्टुरेन्टहरू वा केही किचनहरूमा पनि टिसु होल्डर हुन्छन्।
कसरी टिशो होल्डर छनौट गर्ने?
टिसु होल्डरको प्रयोग सामान्य छ, र बजारमा धेरै प्रकारका छन्, उपयुक्त टिश्यु होल्डर छनौट गर्न यसले थोरै समय लिन सक्दछ।
होटेलहरूलाई टिशो होल्डरलाई अझ बढी चाहिन्छ, र तिनीहरूलाई स्टेनलेस स्टीलको प्रकार चाहिन्छ, किनकि स्टेनलेस स्टील सफा गर्न सजिलो हुन्छ। यो सुरक्षित छ र लामो सेवा जीवन छ।यो होटल को वातावरण राम्रो प्रतिबिम्बित गर्दछ।
बाथरूम वातावरण धेरै आर्द्र थियो र नुहाउने पानीको साथ छरिएको थियो। एउटा ढक्कनको साथ टिश्यु होल्डरले पानीलाई टिश्यु होल्डरमा फाल्नबाट रोक्दछ।
शौचालय कागज धारकका लागि स्टेनलेस स्टील सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो। विशेष उपचार गरिएको शुद्ध तामा पनि उपलब्ध छ, जुन जलरोधक र टिकाऊ हो।
किनभने रेस्टुरेन्ट खाना खाने ठाउँ हो, त्यहाँ टेबलमा टिश्यु होल्डर पनि हुनेछ। यो टेबल टिश्यु होल्डर प्रयोग गर्ने उत्तम ठाउँ पनि हो।
सामान्यतया भन्नुपर्दा, भान्सा कम प्रयोग गरिन्छ र भान्साको क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सानो हुन्छ। यदि तपाइँ छनौट गर्न चाहानुहुन्छ भने, टिशु होल्डर छनौट गर्नु उत्तम हुन्छ जसले ठाउँ लिदैन। यो नोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि टिशो होल्डरलाई पानी र इग्निशन स्रोतको नजिक राख्नु हुँदैन।
टिशो होल्डर छनौट गर्दा, यसलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। तपाईंले शैलीको मूल्य, मूल्य र तपाईंलाई आवश्यक पर्ने ठाउँको गुणवत्तामा पनि ध्यान दिनुहोस्।
ड Dong्गगुआन शेंगुइ मेटल शिल्प कं, लि। एक पेशेवर निर्माता र निर्यातक हो जुन विभिन्न प्रकारका खेल पदक ह्याn्गर र मेटल स्पोर्ट हुकको डिजाइन र उत्पादनमा विशेषज्ञ हुन्छ। धातु गहना धारकहरु आदि
हाम्रा सबै उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय गुणवत्ता मापदण्डहरूको अनुपालन गर्दछन्। हाम्रो सुसज्जित सुविधा, उच्च प्रशिक्षित कर्मचारीहरू र उत्पादनको सबै चरणहरूमा उत्कृष्ट गुणवत्ता नियन्त्रणले कुल ग्राहक सन्तुष्टिको ग्यारेन्टी गर्न हामीलाई सक्षम गर्दछ।